चर्चित हाँस्यकलाकार ब्रह्मानन्दम एक फिल्ममा काम गर्नका लागि लिन्छन् एक करोड भारु ! - Experience Best News from Nepal
१गगन थापा बने शिक्षामन्त्री, अर्थ मन्त्रिमा रिजाल
२कान्सको रेड कार्पेटमा ‘गोल्डेन मर्मेड’ ऐश्वर्या (फोटो फिचर)
३‘सामाजिक सञ्जाल घातक’ सेलेना
४कपिल शर्मा पिता बन्ने !
५बक्स अफिसमा जात्रै जात्राको आक्रामक व्यपार २ दिनमा २ करोड
६रेकर्ड धारी मेस्सीलाई प्रतिष्ठित पीचीची अवार्ड
७तेरिया मगरको “तिम्रो मायाले बाँधेर राख”, कभर गित सार्बजनिक (हेर्नुहोस् भिडियोसहित)
८नेपाल टेलिकमबाट अब दश पैसामा एक मिनेट कुराकानी, तर कसरी ?
चर्चित हाँस्यकलाकार ब्रह्मानन्दम एक फिल्ममा काम गर्नका लागि लिन्छन् एक करोड भारु !
प्रकाशित मिति : आइतवार, फाल्गुन २६, २०७५
दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योगका चर्चित हाँस्यकलाकार ब्रह्मानन्दमको मुम्बईमा मुटुको अप्रेशन भएको छ । छाति दुख्ने समस्या देखिएपछि अस्पताल पुगेका उनको मुटुको अप्रेशन गर्नुपरेको थियो ।उनको अप्रशन एशिय हार्ट सेन्टरका डाक्टर रमाकान्त पांडाले गरेका ।
यसैबिच ब्रह्मानन्दमलाई अर्को दक्षिण भारतीय अभिनेता अलु अर्जुनले अस्पताल पुगेर भेट गरेका छन् । उनलाई भेटेपछि अलु अर्जुनले लेखेका छन्, ‘वास्ताविक आइरन म्यान, एक बलियो हृदय भएका मानिस ।
रमाइलो र निडर , मेरा किलबिल पाण्डेलाई देखेर निकै खुशी भएको छु । लभ ब्रामी ।’उनले तीन दशकको फिल्मी करिअरमा १००० भन्दा धेरै फिल्ममा काम गरेका छन् । ब्रह्मानन्दमको नाम गिनीज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा पनि दर्ता छ ।
यो रेकर्ड २००७ मा एकै भाषामा ७०० भन्दा धेरै फिल्ममा अभिनय गरेकोमा दर्ता गरिएको हो ।ब्रह्मानन्दम एक फिल्ममा काम गर्नका लागि एक करोड भारु लिन्छन् । ब्रह्मानन्दम यति चर्चित छन्की साउथका हरेक दुई वा तीन फिल्म मध्ये एकमा उनी देखिन्छन् ।
यस्ता तस्वीर आएपछि एकाएक इन्टरनेटमा छाइन् अनुष्का शेट्टी (हेर्नुस् तस्वीरहरू)
अष्ट्रेलियाको समुन्द्रमा रमाउदै स्वस्तिमा (हेर्नुहोस तस्बिरहरु)
सोनु निगमको नेपालमा खिचिएको म्युजिक भिडियो ‘शिव शंकरा’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)
अनुष्का भन्छिन आवश्यकता पूरा गर्नका लागि मात्र चलचित्रमा काम गर्दिनँ
ड्रेसको कारण ट्रोल बनेकी वर्षाला सिवाकोटीलाई नेपाली रनवीर सिंहको उपनाम !
‘दुश्मनी’ बिर्सिएर एकसाथ काम गर्ने तयारीमा सलमान र अर्जुन ! आखिर के भएको थियो उनीहरु विच ?
मलाइका र अर्जुन विवाह बन्धनमा बाधिदै !! कहिले गर्दै छन् यी दुई विहे ?
बलिउडका यी ९ हिट जोडी जसको माया एउटासँग विवाह अर्कैसँग भयो ?? हेर्नुहोस कसको को संग ??